"विकृत मानसिकताका भद्दा टिप्पणीको पछि हैन आफ्नो भविष्य निर्माणमा जुट" – Nepal Japan
"विकृत मानसिकताका भद्दा टिप्पणीको पछि हैन आफ्नो भविष्य निर्माणमा जुट"
नेपाल जापान ५ भाद्र १३:०५
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्थगित भएको २०७६ को एसईई परीक्षालाई विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा अति निकृष्ट किसिमका टिप्पणी भए । बालबालिकाको भविष्यको ख्यालै नगरी उनीहरुमा मानसिक यातना दिने काम सामाजिक सञ्जालबाट भयो । एसईईको नतिजापछि जेजस्ता टिप्पणीहरु भए यसले सामाजिक सञ्जाल असामाजिक जालोका रुपमा परिणत भयो । सामाजिक सञ्जालबाट असामाजिक टिप्पणी गर्दै सामाजिक मर्यादाको घोर अपमान भयो ।
अलिकति मानवीय सम्वेदनशीलताको समेत ख्याल नगरी विद्यार्थीहरुको मानसिकतामा कस्तो असर पर्छ भन्ने सोच्दैनसोची गरिएका टिप्पणीहरुले विद्यार्थीहरु विक्षिप्त बन्न पुगेका छन् । यस्तो लाग्थ्यो एसईईको नतिजा परीक्षाविना सार्वजनिक गर्नुको कारण र यसो नगर्दा उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक असरको कसैले ख्याल गरेको पाइएन । एउटा विद्यार्थीले १० वर्षसम्म विद्यालय शिक्षामा गरेको मेहेनत, अभिभावकको लगानी र शिक्षक–शिक्षिकाको परिश्रमको फल एसईई परीक्षापछिको उच्च शिक्षा हो । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्यालयको मूल्यांकनलाई आधार मानेर नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यसलाई लिएर बालबालिकाको मानसिक सन्तुलन नै खलबलिने गरी टिप्पणी गर्दा मानवीय सम्वेदनशीलता कता हरायो ?
हुन त अहिले विश्वभरकै मानिसमा विक्षिप्तता पैदा भएको छ । सायद कोरोनाको कहरले मस्तिष्कमा गढेको विकारको उपज होला यस्तो टिप्पणी ! तर यस्तो टिप्पणीको असर आफ्नै छोराछोरी, भाइ–भतिजालाई पनि पर्छ भन्ने ख्याल नहुनु चाहिं महामूर्खता नै हो । एसईई नतिजा सार्वजनिक भएपछि फेसबुकका भित्ताहरु जसरी रंगियो सायद यति नकारात्मकता यसअघि कहिल्यै अभिव्यक्त भएको थिएन ।
नतिजा सार्वजनिक भएदेखि व्यक्त नकारात्मक टिप्पणीले आम विद्यार्थीहरुको मनस्थिति नै खलबलिने स्थिति उत्पन्न भएको छ । विना गर्भाधान बच्चा जन्मियो भन्ने किमिसको टिप्पणी गर्नेहरुले के बुझ्नु आवश्यक छ भने एसईई परम्परागत परीक्षाबिना नतिजा आउनु भनेको पढ्दै नपढी आएको हैन । नतिजाको एउटा प्रक्रिया मात्र अबरुद्ध भएको हो– त्यो पनि वैश्विक परिस्थितिका कारण ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यालयको मूल्यांकनको आधार भनेको ९५ प्रतिशत परीक्षा नै हो । त्यो मूल्यांकन सेन्टअप परीक्षामा आधारित हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा एउटा विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकले जति उसको क्षमता चिनेको हुन्छ उसले दिएको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नेले बुझेको हुँदैन । किताब अगाडि राखेर उत्तरपुस्तिका जाँच्नेले भन्दा वर्षौंदेखि पढाएर परीक्षा लिएका शिक्षकले गरेको मूल्यांकन उत्तम हुन्छ । १० वर्षसम्म पढाउने शिक्षकको मूल्यांकन कुनै विद्यार्थीको अनुहार नै नदेखेकाले कपी हेरेर गरेको मूल्यांकन कुनै अर्थमा कमजोर हुँदैन ।
कुनै पनि विषयमा नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र जनाउने हो भने यसले हामीलाई कहीं कतै पुर्याउँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने विद्यालयले पठाएको मूल्यांकन मात्रै नतिजा प्रकाशको आधार थिएन, हैन । त्यहाँ कुनै मूल्यांकनमा शंका लागेमा परीक्षा बोर्डले पुनः परीक्षण गर्ने प्रावधान थियो, गरेको छ । कतिपय विद्यालयहरुले त्यस्तै शैलीमा मूल्यांकन पठाएपछि पुनः पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तसर्थ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विषम परिस्थितिले उत्पन्न यो अवस्थालाई मजाक र आक्रोश व्यक्त गर्ने मौकाका रुपमा नलिऔं ।
अन्त्यमा, आम विद्यार्थीहरु जो भविष्यमा उच्च शिक्षाको तयारीमा छन्, केही विकृत मानसिकता भएकाहरुको टिप्पणीलाई लिएर कुण्ठित हुनु आवश्यक छैन । १० वर्षको मेहेनतको फल योभन्दा राम्रो पनि हुनसक्थ्यो वा योभन्दा कमजोर पनि हुनसक्थ्यो– यसलाई सामान्य रुपमा लिएर आफ्नो अगाडिको बाटो तय गर्नु नै सबैको भलाई छ । सबैले एउटा प्रण गर्नुछ– एसईईको नतिजा “आफ्नो हात जगन्नाथ” भयो भन्नेहरुलाई गलत सावित गर्ने गरी आगामी अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ । सुखद भविष्यको शुभकामना !
(लेखक श्रेष्ठ उर्सा मेजर चिल्ड्रेन्स एकेडेमीका संचालक सदस्य हुनुहुन्छ)